ဘန်ကောက်က မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် စေ◌ျး၀◌ယ်လို့ကောင်းတဲ့ Mall များ🛒🛍 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » ဘန်ကောက်က မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် စေ◌ျး၀◌ယ်လို့ကောင်းတဲ့ Mall များ🛒🛍
ဘန်ကောက်က မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် စေ◌ျး၀◌ယ်လို့ကောင်းတဲ့ Mall များ🛒🛍
Posted by Mon Lay on Oct 4, 2020 in Local Guides, Travel |0comments
ဘန်ကောက်ဆိုတာ မြန်မာလူမျိုးတွေအနေနဲ့ စိမ်းနေမယ်လို့ မထင်ပါ ဘူးနော်။ အလည်အပတ်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စေ◌ျး၀◌ယ်ချင်လို့သွား တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆေးကုချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းမျိုးစုံနဲ့ရောက် နေကြ တာဆိုတော့လေ။ ဒီတစ်ခေါက်မွန်လေး Home stay လေးရတုန်း ဘန်ကောက်မှာ မြန်မာ လူမျိုးတွေအတွက် ၀◌ယ်လို့လည်းကောင်း၊ လည်လို့လည်းကောင်းတဲ့ shopping mall လေးတွေကိုပြောပြပေး သွားပါမယ်။
၁) Platinum Fashion Mall🛍
ဒါကတော့ မြန်မာလူမျိုးတွေအများစုံစေ◌ျး၀◌ယ်ကြတဲ့နေရာပါ။ ခေါင်းအစ၊ ခြေအဆုံး ပစ္ညည်းအစုံရှိပါတယ်။ အကျီတွေ၊ ဖိနပ်တွေ၊ အိတ်တွေ၊ မျက်မှန်တွေ အစုံပါပဲ။ ပေါချောင်ကောင်းလည်းရနိုင်ပါတယ်။ လက်လီလက်ကားလည်းရတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြန်ပြီးရောင်းချဖို့ ၀◌ယ်ချင်ရင် ဒီကိုသွားပါ။ သူ့မှာ Food court လည်းရှိတယ်။ အရမ်းစားကောင်းတယ်။
လိပ်စာကတော့ 222 แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ชั้น1 ห้อง221B, Ratchathewi, Bangkok.
အချိန်က မနက် (၉) ည (၈) ပါ။
၂) Pratunam Market🛍
သူလည်းမြန်မာလူမျိုးတွေအရမ်းသွားတဲ့နေရာတစ်ခုပါပဲ။ အ၀◌တ်အစားအသစ်အဆန်း တွေအရမ်းပေါသလို..Fast food တွေလည်းပေါတယ်။ လက်လီလက်ကားလည်းရတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြန်ပြီးရောင်းချဖို့ ၀◌ယ်ချင်ရင် ဒီကိုသွားလည်းရပါတယ်။
လိပ်စာကတော့ Phayathai Rd, Khwaeng Thanon Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok.
အချိန်က ၄ မျိုးရှိတယ်။ မနက်ပိုင်းစေ◌ျးဆို မနက်အစော (၄) ကနေ မနက်(၉)အထိပါ။ တစ်နေ့လုံးဖွင့်တဲ့စေ◌ျးဆို မနက် (၇)ကနေ နေ့လည်(၃)အထိပါ။ အထဲက အဲကွန်းရှိတဲ့ မော်လ်ကတော့ မနက် (၁၁) ကနေ ညနေ(၄)အထိပါ။ ညစေ◌ျးဆို ည(၇)ကနေ မနက်(၃)အထိပါ။ ဒီတော့ ကိုယ်အဆင်ပြေမယ့်အချိန်ကို ချိန်ပြီးသွားလို့ရတာပေါ့။
၃) Pantip Plaza🛍
ဒီမော်လ်ကတော့ one of the most popular Bangkok electronics malls လို့တင်စားရလောက်အောင် လျှပ်စစ်ပစ္ညည်းတွေ၊ device တွေကို နှစ်သက်ခုံမက်တဲ့သူတွေရဲ့ နိဗ္ဗာန်ဘုံပါပဲ။ အဲ့မှာ Brand new တွေရော၊ used တွေရော အားကြီးပဲ။ လက်လီလက်ကား ရလို့ ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြန်ရောင်းချင်ပြန်ရောင်းပေါ့။
လိပ်စာကတော့ Phetchaburi Rd, Makkasan, Ratchathewi, Bangkok
အချိန်က မနက် (၁၀) ကနေ ည(၉)အထိပါ။
၄) Central World🛍
သူကတော့ ဖက်ရှင်ဆိုင်ပေါင်း ၅၀၀ နဲ့ စားသောက်ဆိုင်ပေါင်း အခု ၁၀၀ ကျော်ရှိတာပါ။ Luxury brand တွေကအစ အခြားလျှပ်စစ်ပစ္ညည်း အဆုံး မျိုးစုံအောင်ရှိတဲ့ မော်လ်ပါ။ Official Apple store နဲ့ နာမည် ကြီး စာအုပ် ဆိုင်တွေပါ ရှိတဲ့အပြင် ရေခဲပြင်စကိတ်ပါရှိလို့ ကြုံလို့စီးတတ် ရင် စီးသွား လို့ရပါတယ်။
လိပ်စာကတော့ 999/9 Rama I Rd, Pathum Wan, Pathum Wan District, Bangkok
အချိန်ကတော့ မနက် (၁၀) ကနေ ည(၁၀)အထိပါ။
၅) Siam Square🛍
အထပ် ၇ ထပ်ရှိတဲ့ မောလ်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးပေါ် ပစ္ညည်းတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေအကြိုက် outlet လည်းပေါတယ်နော်။ ကော်ဖီဆိုင်နဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေလည်း ရှိတော့ အေးဆေးပဲပေါ့။
လိပ်စာကတော့ 388 Rama I Rd, Pathum Wan, Bangkok
အချိန်ကတော့ မနက် (၁၀) ကနေ ည(၁၀) ပါ။
၆) MBK Centre🛍
အထပ် ၈ ထပ်ရှိပြီး အ၀◌တ်အစား၊ လက်၀◌တ်ရတနာ၊ အိတ်၊ ခရီးဆောင်အိတ်၊ ပရိဘောဂ၊ ဖုန်း၊ ကင်မရာ စတဲ့ ပစွည်းတွေတစ်နေရာထဲမှာ စုံလင်စွာရနို်င်ပါတယ်။ outlet လည်းရနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာတိုးတွေ အရမ်းပို့ပေးတဲ့နေရာပေါ့။ ရောင်းတဲ့ သူတွေကလည်း မြန်မာတွေများတယ်။ စေ◌ျးလည်းကြီးတတ်လို့ ၀◌ယ်မယ်ဆို ရအောင်ဆစ်ပါ။ Food court2ခုတောင်ရှိတယ်။ 3D Trick Art museum လည်းရှိတော့ စေ◌ျး၀◌ယ်ပတ်ပြီး အပျင်းပြေ၀◌င်ကြည့်သွားလို့ရတာပေါ့။
လိပ်စာကတော့ 444 Phayathai Road, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok
၇) Chatthuchak weekend market🛍
ကိုယ်အကြိုက်ဆုံးစေ◌ျးပေါ့။ သူ့ကို JJ market လို့လည်းခေါ်တယ်တဲ့။ weekend စေ◌ျးဆိုတော့ စနေ၊ တနင်္ဂနွေပဲဖွင့်တာပါ။ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ဘန်ကောက် ကို စရောက် တော့ MDတို့က ပထမဆုံးခေါ်သွားတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အပြင် ပစ္ညည်းတွေက စေ◌ျးချိုသလားမမေးနဲ့။ မုန့် ဆိုင်တွေလည်းအများကြီး၊ အိမ်ပြန်လက်ဆောင်ပစ္ညည်းဆို်င်တွေရော၊ အထည်ဆိုင်တွေရော..အိုး စေ◌ျး၀◌ယ်ထွက်ရတာကြိုက်တဲ့ မွန်လေးအတွက်တော့ နိဗ္ဗာန်ဘုံပါပဲ။ စေ◌ျး၀◌ယ်ရလွယ်အောင် လို့ section တွေနဲ့ ခွဲပေးလိုက်ပါတယ်။
− Clothing & Accessories (sections 2-6, 10-26)
− Handicrafts (sections 8-11)
− Ceramics (sections 11, 13, 15, 17, 19, 25)
− Furniture and Home Decoration (sections 1,3,4,7,8)
− Food and Beverage (sections 2, 3, 4, 23, 24, 26, 27)
− Plants and Gardening tools (sections 3, 4)
− Art and Gallery (section 7)
− Pets and Pet Accessories (sections 8, 9, 11, 13)
− Books (sections 1, 27)
− Antiques and Collectibles (sections 1, 26)
− Miscellaneous and Used Clothing (sections 2, 3, 4, 5, 6, 22, 25, 26)
လိပ်စာက Chatuchak Park, Kamphaeng Phet2Rd, Chatuchak, Bangkok
အချိန်ကတော့ မနက် (၉) ကနေ ညနေ (၆)ပါ။
နောက်ထပ်ပြောပြစရာ မော်လ်တွေ ကတော့ အများကြီးကျန်ပါသေးတယ်။ သူတို့က တစ်မြို့နယ်ထဲမှာတင် ၄၊၅ ခုလောက်ရှိနေတာဆိုတော့ ပြောလို့ ကြာရင်ငြီးငွေ့သွားမှာစိုးလို့ မွန်လေး သွားခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေ အတွက် အသင့်တော်ဆုံး၊ မြန်မာလူမျိုး တွေ taste နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ မောလ်တွေကိုပြောပြပေး လိုက်ပါတယ်။
ဘန်ကောက်ခရီးကို ပထမဆုံးလိုက်ပို့်ပေးခဲ့တဲ့ Kinnari Travel က MD မစန္ဒာကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။🙏🙏
#shopping #malls #bangkok #travel #trip #review